Ulwazi oluqoqayo – Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds
/ Ulwazi oluqoqayo
Siphethe izikhwama ezintathu, okuyi; i-Natal Joint Municipal Pension Fund (Superannuation), i-Natal Joint Municipal Pension Fund (Retirement), okuyizikhwama zombili zemihlomulo, ezinemihlomulo eqinisekisiwe engaqageleka. I-Kwazulu-Natal Joint Municipal Provident Fund okuyisikhwama esikhokhelwa imali nokongela umhlalaphansi okuncike emalini ekhokhiwe, inzalo kanye nenzuzo lapho ilungu libuka ubungozi ekutshalweni kwemali (Defined Contribution). IZikhwama zontathu zikhipha imihlomulo yempesheni kubasebenzi bakamasipala esifundazweni saKwaZulu-Natali, sinika amalungu ithuba lokukhetha umkhiqizo, ubungako bemali azoyikhokha kanye nendlela yokukwazi ukushintsha phakathi kwezikhwama zonthathu ngokubuka ukushintsha kwezimo.
I-Natal Joint Municipal Pension Fund (Superannuation)
ISikhwama se-Superannuation sasungulwa ngo 1942 njengesikhwama esichaziwe somhlomulo, kanti sinikeza imali eyisamba yomhlomulo kuphela uma, ilungu lithatha umhlalaphansi noma lishona, kubhekwe isamba semali isiyonke ekhokhwe yilungu kanye nomqashi, kuhlanganisa inzuzo kanye nenzalo etholakele. Eminye imininingwane ngokwakheka kwemihlomulo ekhishwayo, ubungako bemali ekhokhwayo kanye nolunye ulwazi olumayelana nalokhu bheka isigaba esinesihloko – Funds
I-Kwazulu-Natal Joint Municipal Provident Fund
ISikhwama se-Provident sasungulwa ngo 1996 njengesikhwama esikhokhelwa imali, kanti sinikeza imali eyisamba yomhlomulo kuphela uma ilungu lithatha umhlalaphansi noma lishona, kubhekwe isamba semali isiyonke ekhokhwe yilungu kanye nomqashi, kuhlanganisa inzuzo kanye nenzalo etholakele. Eminye imininingwane ngokwakheka kwemihlomulo ekhishwayo, ubungako bemali ekhokhwayo kanye nolunye ulwazi olumayelana nalokhu bheka isigaba esinesihloko – Funds
Ukwenza umsebenzi osezingeni eliphezulu embonini yomhlalaphansi kanye nemihlomulo kumalungu ethu, abazohlomula kanye nabahola impesheni.
Inhloso yethu wukusebenzela amalungu ngokusemandleni ethu ngokuqinisekisa izinga eliphezulu lezinto ezitholakala kumhlalaphansi ngokunikeza inkululeko kwezezimali. Lenhloso ifezekiswa yizibophezelo zeSikhwama, ezihlanganisa ukuphathwa kwempesheni, ukuqoqwa kwemali, ukuhlanganiswa kwemali engenile kanye nokutshalwa kwemali ekhokhiwe okuzinzile nangendlela enobuhlakani futhi eqaphela ingozi uma kutshalwa imali.
Kwa-NJMPF sikholelwa kulokhu:
Ukuthembeka kanye nobuqotho.
Ukusebenza ngempumelelo kanye nangokuqeqesheka.
Ukubeka izinto obala kanye nokuzibophezela ekubikeni.
Ukusimamisa /ukuvikela amalungelo amalungu.
Ukwanelisa bonke abayingxenye yesikhwama.